Weerar argagixiso ah oo ka dhacay caasimadda London ee dalkaasi Ingiriiska keenay dhimashada 7 qof iyo dhaawaca 48 kale iyo 12 oo loo xidhay arrintaasi | Baadiye Media Center
Weerar argagixiso ah oo ka dhacay caasimadda London ee dalkaasi Ingiriiska keenay dhimashada 7 qof iyo dhaawaca 48 kale iyo 12 oo loo xidhay arrintaasi
London (BMC)-Weerar argagixiso oo lagu qaaday caasimadda London ee carriga dalka UK ayey ku dhinteen 7 qof halka ay 48 kalana ku dhaawacmeen kuwaasoo ay dhaawacyadoodu kaladuwann yihiin,dadka jaarka ay ahaayeen ayaa sheegaya inuu mida 3 nin oo weerarkaasi fuliyey lahaa 3 caurra 3 sanana uu jaarkooda daganaa ninkaasi.
qaraxani waa kii 3-aad 3 bilood gudahooda waxaanu ahaa kii hore qarax iyo tooriyeyn lagu laayey 5 qof oo u badnaa Police-ka kii ku xigayna waxa uu ahaa kii ay 22 qof ku dhinteen 2 todobaad ka hor halka uu ka nina xalay ka dhacay dhacay meel aan ka fogeyn xafiiska Ra’iisulwasaaraha dalkaasi.
haweenayda dalkaasi Uk Ra’iisul wasaaraha ka ah Ms Trese May ayaa sheegtay inuu dulkqaadii dhamaaday intaasina ay ku filantahay in loo dulqaato argagixisadda waa sida ay hadalkeeda u dhigtay e.
dalka UK ayaa lagu wadaa inuu maalinta arbacada ah ee foodda innagu soo haysa ay doorashooyin ka dhacaan waxaanay mashaqadani ku soo beegmaysaa iyadoo ay dadka dalkaasi u diyaar garoobayaan inay u dareeraan maalintaasi goobaha sanaaduuqda codbixinta waxaanay arrintaasi dalka dalkaasi ku keenaysaa warwar iyo cabsi badan inay qaraxyo kale ka dhacaan goobaha codbixintu ka dhacayso.
maamulka Ms May ayaa ciidamadii ugu faraha badnaa soo dhoobtay waddooyinka dalkaasi UK oo dhan si ay uga hortagaan qaraxbada noocan oo kale ah,dhanka kale wararku waxay sheegayaan inay ciidamada police ku arrintaa u soo xidheen tiro dad ah oo gaadhaya 12 kuwaasoo lala xidhiidhinayo inay ku lug lahaayeen weerarkaasi.